Ka dib in ka badan saddex toddobaad tan iyo markii la sii daayay macruufka ugu horreeya ee horumarinta 10, Apple toddobaadkan waxay soo saartay beta-kii ugu horreeyay ee dadweynaha ee iOS 10, taasi runti waa beta-kii labaad ee soo-saareyaasha. Si dhakhso leh Actualidad iPhone ayaan ku tusnay sidee baan u rakibi karnaa beta-kan ugu horreeya ee dadweynaha de IOS 10 oo noo keentay warar aad u tiro badan marka la barbar dhigo beta-kii ugu horreeyay ee Apple sii daayo ee iOS 10. Laakiin shirkadda ku saleysan Cupertino ayaa sidoo kale soo bandhigtay beta-kii ugu horreeyay ee dadweynaha ee macOS 10, nidaamka hawlgalka ee loogu talagalay Macs kaas oo sida cusub ee noogu oggolaanaya inaan Mac-da ku furno Apple Watch. Tufaax sidoo kale ayaa sii daayay beta-kii shanaad ee iOS 9.3.3, beta oo sii wadaya hagaajinta hawlgalka iyo waxqabadka macruufka 9.3.2.
Isbuucaan Apple waxay daahfurtay akadeemiyadii ugu horeysay ee lagu barto sida loo horumariyo codsiyada iOS ee Naples, akadeemiyad loogu talagalay ma aha oo kaliya ardayda talyaaniga, laakiin sidoo kale waa loogu talagalay dhammaan ardayda ku nool Yurub ee xiiseynaya barashada sida loo horumariyo barnaamijyada nidaamka deegaanka ee iOS. Haddii aan ka hadalno khariidadaha Apple, shirkaddu waxay ku dartay 29 magaalo oo cusub oo ah aragtida 3D, oo aan ka helnay 2 magaalooyin Isbaanish ah iyo shan magaalo oo Mexico ah. Haddii aan ka hadalno Apple Pay, dheh intaas hadda laga heli karo Switzerland halkaan waxaan kusii sugeynaa wajiga nacasyada.
Sannadkan way cadahay taas Samsung waxay ku garaacday ciddiyaha madaxa Samsung Galaxy S7 tan iyo markii shirkaddu waxay ku laaban doontaa tirooyinka iibka ee laba sano ka hor, markuu xukunka ku qabtay taleefanka aaladiisa Galaxy S iyo Galaxy Note. In kasta oo Apple ay sii wado sida iibka boosteejooyinkeedu u sii dhacayaan caddayn ahaanna waxaan haynaa tirooyinka laga keenay Shiinaha, kaas oo soo saaraha ayaa u dhacay booska shanaad ee iibka, oo ka dambeeya afarta shirkadood ee waaweyn ee dalka. Toddobaadkan waxaan sidoo kale ka hadalnay khayaanada cusub ee saameyneysa qaar ka mid ah Mac-yada loo yaqaan Eleanor oo kara u rog Mac-keena shabakad zombie ah si loo fuliyo weerarada DDoS iyo waxyaabo kale.
Xarkaha Nylon ee loogu talagalay Apple Watch ka yar € 20